चलचित्र ‘सुश्री सम्पत्ति’ को छायांकन सुरु
काडमाण्डौ । सञ्चारकर्मी तथा निर्देशक सुब्रत आचार्यले निर्देशन गर्ने नयाँ फिल्म ‘सुश्री सम्पत्ति’ को छायांकन सुरु भएको छ । मगंलबार बिहान पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा एक कार्यक्रमका बीच चलचित्रको चलचित्र युनीटले शुभमुहूर्त सम्पन्न गरेको हो ।
कमेडी जनरामा निर्माण हुने फिल्मको सम्पूर्ण छायांकन पोखरामा हुने निर्देशक आचार्यले बताएका छन् । फिल्ममा समावेश एउटा गीत भने काठमाडौंमा खिचिने बताईएको छ । ‘रुद्र गर्ल’ सारा सिपालीसँग अभिनेता सलोन बस्नेतले फिल्ममा रोमान्स गर्ने बताईएको छ ।
आगामि बर्ष २०७५ को तीजको नजिकमा प्रदर्शन हुने ‘सुश्री सम्पत्ति’ मा नायिका प्रियंका कार्की गेस्ट रोलमा देखिने भएकी छन् । विनोद न्यौपाने, प्रमोद अग्रहरी, राजाराम पौडेल, विशारद बस्नेत, सुनिता श्रेष्ठ ठकुरी लगायतका कलाकारहरुको पनि फिल्ममा अभिनय रहने निर्माण युनिटले जानकारि गराएको छ । रमेश त्वायना प्रस्तुतकर्ता रहेको ‘सुश्री सम्पत्ति’ को कथा निर्देशक सुब्रत आफैंले लेखेका हुन् भने फिल्मको निर्मातामा विज्ञान राई, नुनम सुब्बा र रमन सिलाकार रहेका छन् । अभिमन्यू निरवी र निर्देशक आचार्यको डाइलग रहेको फिल्मको स्क्रिन प्ले अभिमन्यूकै रहने छ ।
सुरेश अधिकारीको सोलो शब्द र संगीत रहेको फिल्ममा कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी, भरत रेग्मीको सम्पादन र अर्जुन तिवारीको छायांकन रहने छ । सुख सुविधामा हुर्किएकी एक युवतीको कथा चलचित्रमा रहने बताईको छ ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, फागुन १५, २०७४१६:००
श्रीदेवीको हत्या गरिएको आशंका, आयो अन्डरवर्ल्ड डन दाऊद इब्राहिमको नाम
रणवीर र अलियाको प्रेम छताछुल्ल: प्रेमीको परिवारसँग पुगिन् रेस्टुरेन्ट!
चलचित्र कलाकार संघ ‘फान’अवार्ड (फाेटाेफिचर)
अर्धनग्न अवस्थामा निकी मिनाजले गराईन् फोटोशुट ! तस्विरमा साफ देखिए निजी अङ्ग !
जब जाह्नवी कपूरले शाहरुख खानलाई अवार्ड दिईन, भिडियो बन्यो भाईरल(भिडियो सहित)